China Gold Gravity Knelson Centrifugal Concentrator Isihlukanisi ifektri kanye nabaphakeli | Khuphuka
Isihlukanisi seGolide Gravity Knelson Centrifugal Concentrator
I-automatic Discharge Centrifugal Gold Concentrator nayo ibizwa ngeKnelson gold centrifugal concentrator, noma igolide centrifuge. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukuqoqa izinhlayiya zamahhala zamahhala kusuka esihlabathini se-placer alluvial segolide noma emhlabathini we-slurry wegolide ngokugaya, njengebhola lokugaya noma isigayo samanzi sepani.
IGold Centrifugal Concentrator isebenza ngomgomo ofanayo kuFalcon noma eKnelson Gold Concentrator, kodwa intengo eyodwa noma eyodwa kwezingu-10 kuzo. Igolide leCentrifugal Concentrator lingasetshenziswa hhayi kuphela lapho kufakwa khona izimayini zegolide, kepha futhi nasezimayini ezilukhuni zamatshe ukuze kutholakale igolide lemvelo, lingene esikhundleni sokuhlanganiswa futhi kutholakale negolide ekuhlanganisweni.
I-Centrifugal gold concentrator wuhlobo oluthile lwamathuluzi wokuhlushwa adonsela phansi. Imishini isebenzisa imigomo ye-centrifuge ukuthuthukisa amandla adonsela phansi ahlangabezana nezinhlayiya zokuphakelayo ukwenza ukwahlukana ngokuya ngobuningi bezinhlayiyana.Izinto eziyinhloko zale yunithi ziyisitsha se-cone esimise okwe-cone, esijikeleziswa ngesivinini esikhulu yimoto kagesi kanye Ibhantshi lamanzi elicindezelweyo elihlanganisa isitsha.Izinto ezondliwe, ngokuvamile ezivela ekugobhozeni kwebhola noma isiphepho esiphuphuma ukuphuma kwegazi, kufakwa njengesilayidi esibheke maphakathi kwesitsha kusuka ngenhla.I-slurry yokuphakela ixhumana nepuleti lomkhumbi futhi ngenxa yokujikeleza kwawo , igxothelwa ngaphandle. Imikhawulo engaphandle yendlu yesitsha sokugxila uchungechunge lwezimbambo futhi phakathi kwezimbambo zombili ngoyedwa.
Ukusebenza, okokusebenza kufakwa njenge-slurry yamaminerali namanzi esitsheni esijikelezayo esifaka phakathi ama-grooves akhethekile noma ama-riffles wokubamba ubukhulu. Amanzi ahlanzwe ngamanzi / amanzi okugeza emuva / amanzi abuyiswayo afakwa ngezimbobo eziningi zokufaka amanzi kusigaxa sangaphakathi ukugcina umbhede unamaminerali asindayo. Amanzi ahlanzekile / amanzi okugeza emuva / amanzi abuyayo adlala indima ebalulekile ngesikhathi sokuhlukana.
Ubuningi bamanzi abuyela emuva
(kg / iminithi)
(kg / isikhathi)
Isivinini sokujikeleza kwesigaxa
Kudingeka amanzi okucindezela
1) Izinga eliphakeme lokutakula: Ngokuhlolwa kwethu, izinga lokuthola kabusha i-placer gold lingaba ngu-80% noma ngaphezulu, nge-rock rein gold, isilinganiso sokutakula singafinyelela kuma-70% lapho usayizi wokudla ungaphansi kuka-0.074mm.
2) Kulula ukuyifaka: Kudingeka indawo encane elinganisiwe kuphela. Umshini olayini ogcwele, ngaphambi kokuwuqala, sidinga kuphela ukuxhuma iphampu lamandla namandla.
3) Kulula ukuzivumelanisa: Kunezici ezi-2 kuphela ezizothinta umphumela wokutakula, ingcindezi yamanzi nosayizi wokudla. Ngokunikeza ingcindezi efanele yamanzi nosayizi wokondla, ungathola umphumela omuhle kakhulu wokululama.
4) Akukho ukungcola: Lo mshini uqeda kuphela amanzi namandla kagesi, nokukhipha umsila namanzi. Umsindo ophansi, akekho umenzeli wamakhemikhali ohilelekile.
5) Kulula ukusebenza: Ngemuva kokuqeda ingcindezi yamanzi nosayizi wokudla ulungise, amaklayenti adinga kuphela ukubuyisa ukugxilwa njalo emahoreni ama-2-4. (Kuya ngebanga lemayini)
Langaphambilini Ephathekayo Ucingo Udizili Engine Stone Emhlathini Crusher Machine
Olandelayo: Igolide Ore Ukugaya Okumanzi Pan Mill Machine
Igolide Kacha Centrifugal Concentrator Collector M ...